यस वर्षको गजल प्रतिभा पुरस्कार डा. निरज भट्टराईलाई - NepalDut NepalDut
यस वर्षको गजल प्रतिभा पुरस्कार डा. निरज भट्टराईलाई
सन्ध्याका सल्लाहकार दीपक समीपको संयोजकत्वमा संस्थापक अध्यक्ष दिलिप दोषी र पूर्व अध्यक्ष बिर्सना बस्नेत सदस्य तथा अध्यक्ष मोहन भण्डारी र सचिव त्रुपक पदेन सदस्य रहेको प्रतिभा छनोट समितिको सिफारिसमा गजल सन्ध्याले उनलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एनआरएन युकेका युवा संयोजक लालबहादुर गुरुङद्वारा आफ्ना पिताको स्मृतिमा स्थापित रु. १ लाखको अक्षयकोषबाट प्रदान गरिने पुरस्कारमा नगद रु. १५ हजार, ५ सय ५५, सम्मानपत्र र दोसल्ला रहेको छ ।